အများကြီးရှိပါတယ်အလွန်ကြီးစွာသောညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်များထွက်ရှိပါတယ်၊အဖြစ်ကောင်းစွာကဲ့သို့အချို့အစားဆုံးဂိမ်းများလိုပါကသင်ဟာပျော်ရွှင်စေမှာနာရီအဘို့အပေါ်ဆုံး–သို့သော်လည်းအဘယ်သို့အကြောင်းကိုသင်ချင်တဲ့အခါကြိယာနှစ်ခုသဘောတရားအတူတူလား? ကောင်းစွာ၊ကြောင်းရဲ့အစိတ်အပိုင်းဘယ်အရာ၏အရွယ်ရောက်ပြီးသူမိသားစုအားကစားပြိုင်ပွဲပါဘူး၊ဒီအတုံးစာသား၊လိုငွေဒေနာရိရန်အတွက်ပလက်ဖောင်းသင်ပြောပြအဘယ်ကြောင့်အမင်းအကောင်းဆုံးတည်နေရာကိုအင်တာနက်ပေါ်မှာမည်သူမဆိုများအတွက်ရှိကြောင်းတစ်ဦးကခိုင်မာတဲ့ကတိကဝတ်အတွက်ဤအမျိုးအစား။, ကျွန်တော်ထင်လိုကြောင်းကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ရပ်တွေထက်ကျယ်ကျယ်ပြောကျွန်ုပ်တို့၏စကားသည်၊နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်အဘယျ့ကိုယျကိုကိုမထား၏ရောနှောသို့ဤစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်ပြပြီအချိန်နှင့်အချိန်နောက်တဖန်အကျနော်တို့ဘာသိတက်မှကြွလာသောအခါအလွန်ကြီးစွာသောဂိမ်း။ ကျွန်တော်တို့ဟာအဆောက်အဦကိုယ်ကိုကိုယ်တက်ဖို့တစ်ခုတည်းသောနေရာအစဉ်အဆက်သင်သွားရောက်ကြည့်ရှုရန်လိုအပ်သည်သင်ျပျော်စရာ–အောင်မပါဘူးဒါကြောင့်အလုပ်သဘောအရအရေးယူအပေါ်နှင့်နောက်ကျတာထက်?, ကျွန်တော်မထိုင် idly အားဖြင့်နေစဉ်၊စက်မှုလုပ်ငန်းအခြားပြီးကျရောက်ပြီးအနိုင်ပေးအကြောဂိမ်းကစားသူတို့၏အလိုဆန္ဒ၊ဒါကြောင့်ကျေးဇူးပြုပြီးဖတ်များအတွက်ပေါ်ပိုမိုအသေးစိတ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူမိသားစုအားကစားပြိုင်ပွဲနှင့်ကိုယ်အဘို့မြင်အဆင့်များယူဖန်တီးရန်အကောင်းဆုံးအသင်ျရောက်တဲ့မည်သူမဆိုဖြစ်နိုင်အစဉ်အဆက်သွားရောက်ကြည့်ရှု!
ကျနော်တို့လောလောဆယ်တွင်များ ၃၆ ဂိမ်းအတွင်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူမိသားစုအားကစားပြိုင်ပွဲ:မဆိုးကြောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားသာဖာ္ခဲ့ ၂၀၁၉! တဦးတည်းအရာတစုံတခုသောငါတို့သည်မေတ္တာစေဖို့လုံးဝရှင်းရှင်းလင်းလင်းလူတိုင်းဝင်သောအခါဒီမှာအကြောင်းရိုးရှင်းသောတကယ်တော့သင်အရာအားလုံးကိုဖြတ်ပြီးလာလိမ့်မယ်လုံးဝသီးသန့်။ ဤနည်းလမ်းအဘယ်သူမျှမကအပိုင်အတွက်ငါတို့၏ဂိမ်းနှင့်မပေးခေါင်းစဉ်များတဲ့တခြားနေရာကိုရှာဖွေအပေါ်။ တော်တော်လေးကောင်းသောစနစ်အဖြစ်ဝေးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်ကြောင်းယုံကြည်ကြသောကြောင့်အနာဂတ်၏ညမ်းဂိမ္းသွားမှဆင်းလာလတ်ဆတ်သောထုတ်လုပ်ရေးအနေဖြင့်ကြီးမားသောဆိုင်ကအဘယ်အရာကိုသိဂိမ်းကစားချင်တယ်။, ကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရပါတယ်အချို့စက်ဆုပ်ရွံပုံပြင်များနောက်ဆုံးနှစ်အနည်းငယ်နှင့်ချင်ကြဘူးဘာမှလုပ်ဖို့ဘယ်လိုအတူစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အစဉ်အလာလည်ပတ်။ ဤခေတ်၏ခေတ်ညမ်းဂိမ်းထုတ်လုပ်မှုနှင့်ကျွန်တော်မကြောက်င့်အသွားများအတွက်အများဆုံးအနခ်စ္သူျအဓိကထွက်ရှိပါတယ်:! အခုလောက်ကြီးစွာသောအမှုသည်ငါတို့၏ဂိမ်းအကြောင်းအကွာအဝေး၏အကြောင်းအရာများနှင့် niches အားလုံးတော်တော်အမြိုးမြိုးများမှာ။ တလိမ့်မယ်နေ့ခံစားအချို့သောအမေနှင့်သားသံုးေတွက်ပျော်စရာအနေ၊အခြားအရက်–ဒါဟာလိမ့်မယ်အဖေဖေသမီးကိုလိုးစွန့်စားမှုဘယ်မှာပျော်မွေ့ဘယ်တော့မှရပ်တန့်နှင့်ဤစ္ခါမရလောက်သူတို့၏ဖခင်ရဲ့ကြီးမားရိုး!, ဖြစ်နိုင်ခြေအဆုံးမဲ့များမှာမှာအရွယ်ရောက်ပြီးသူမိသားစုအားကစားပြိုင်ပွဲနှင့်ကျွန်တော်ရှာနေဖို့မျှော်ဖေါ်ပြခြင်းဖြင့်သင်သည်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့သွင်းထားနိုင်ပါကအဘို့အထွက်ရှိပါတယ်လူတိုင်းပျော်မွေ့ရန်။
ဘယ်လိုရဲ့အဘို့ဤကြီးစွာသောအဂၤါ:သင်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်လာဒီမှာအရွယ်ရောက်ပြီးသူမိသားစုဂိမ်းတာဝန်ခံလုံးဝအခမဲ့! မှန်–သင်ဖို့ရှိသည်မည်မဟုတ်ဘာမှမဆပ်ဖို့ရအတွင်းရှိအဖြစ်ဝေးငါတို့သိ၊ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးအသင်ျဦးတည်ရာရှိကြောင်းအမှန်တကယ်ယူသောဆုံးဖြတ်ချက်ဒီလိုလုပ်ဖို့။ ဘာရည်ရွယ်ချက်၊သင်မေး? ကောင်းစွာ၊သူတို့နှင့်ကြောင့်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုတေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်နှင့်အတူအရာအားလုံးကိုအဆိုပါဂိမ်းကစားချင်တယ်။ မြင်၊လျှင်၊ငါတို့သည်သင်တို့သင်အခမဲ့အသုံးျပဳကျွန်တော်တို့ရဲ့လွှတ်ပေးမှုနှင့်သင်တို့မထင်ကြဘူးသူတို့၏မုန့်အနှံမှကြွလာသောအခါ incestuous ပျော်စရာ၊သငျသညျတာပေါ့။, ဤသည်ကိုဖန်တီးပေးကြီးမားတဲ့ဖိအားပမာဏသည်ငါတို့အဘို့အစောင့်ရှောက်ဖို့အထိချိန်းတွေ့ဖို့၊လွှတ်မှအသစ်ခေါင်းစဉ်နဲ့နားထောင်ဖို့အလိုအပ်ချက်များကိုနှင့်အကြံအစည်၏အဆိုပါဂိမ်းကစား။ အခါသင်အဘို့အဆပ်ခေါင်းစဉ်ပြီးတော့ကစားတယ်၊ကိုအမှန်တကယ်ဂရုစိုက်မယ်ဆိုရင်သင်ကောင်းတစ်ဦးအချိန်မ–ယူတာပဲအခါသင်ထင်၊လက်ျာ? Anyhow၊အခြေခံအကြောင်းရင်း၏အရွယ်ရောက်ပြီးသူမိသားစုအားကစားပြိုင်ပွဲအကြောင်းအဝင်အချို့သောလမ်းသို့မျက်နှာကိုအာရုံကျနော်တို့တကယ်ကဒီမှာအချိန်ကြာမြင့်စွာအဝုိင်းနှင့်သဘာဝကျကျ၊ဒါကြောင့်အများကြီးတစ်ငရဲ၏အာရုံဖို့ကြိုးစားသည်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ကမ်းလှမ်းမှုကိုဖို့ရှိသည်ကတည်းက၊သင်ဆုံးရှုံးဖို့ဘာမျှမရရှိပါသည်!
သင်ရုံမိနစ်သို့မဟုတ်ဒီတော့ကွာရှိခြင်းကနေဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ျဖင့္သင်ျဂိမ်းများ–ဒါကြောင့်မလုပ်တွေအများကြီးသဘောမျိုးကိုဖန်တီးရန်သင်၏အကောင့်အခုအချိန်မှာနှင့်အဖမ်းအချို့အရေးယူပါတယ်။lusted များအတွက်ဤသူအပေါင်းတို့သည်နှစ်ပေါင်း? သင်တာပေါ့နောက်ဆုံးတော့အပူဆုံးသင်ျဂိမ်းအပေါ်အင်တာနက်တစ်ခုလုံးစုဆောင်းမှု၏ခေါင်းစဉ်မယ်စှဲသင်စောင့်ရှောက်နှင့်အစွဲအဘို့အသင်လာရန်အချိန်ကြာမြင့်စွာ။ မည်သူမဆိုနှင့်အတူကိုချစ်၏ဗီဒီယိုဂိမ်းများနှင့်အကျိုးစီးပွားအတွက်သင်ျဖြစ်သွားဒေါက်ကျော်ဦးခေါင်းနှင့်အတူမေတ္တာ၌ရှိသောကြောင့်ကျနော်တို့ရရှိပါသည်။ ဒီတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်မျက်နှာသာ၊အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးပြီးအဘယ်အရာကိုမြင်အရွယ်ရောက်ပြီးသူမိသားစုအားကစားပြိုင်ပွဲအားလုံးအကြောင်းပါ။, ခင်ဗျားကတစ်ဖွဲ့လုံးသစ်ကိုကမ္ဘာ့အများလိင်ပျော်စရာ–အဘယ်သူမျှမမေးသောမေးခွန်းများ!